एभिन्युज टेलिभिजनएनआरएन महासचिवमा डा. पौडेलको उम्मेदवारी - एभिन्युज टेलिभिजन
एनआरएन महासचिवमा डा. पौडेलको उम्मेदवारी
24 Ashwin 2076 Friday 7:57 am प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को निर्वाचनमा महासचिव पदमा डा केशव पौडेलले उम्मेद्वारी दिने भएका छन् । यही असोज २८ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमा हुन लागेको आइसिसी सम्मेलनमा तनहुँका पौडेलले महासचिव पदमा उम्मेद्वारी दिन लागेका हुन् ।
निर्वाचनमा भाग लिन बिहीबार नेपाल आएका डा पौडेलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महासचिव पदमा उम्मेद्वार दिने घोषणा गरे । उनले आफ्नो अनुभवलाई आइसिसीमा लगानी गर्ने सामाजिक योगदानको चाहनालाई साकार पार्न महासचिवमा उम्मेद्वारी दिन लागेको बताए ।
काठमाडौं ।पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह परिवारसहित आज भारतको पश्चिम बंगाल भ्रमणमा निस्केका छन् । गएको मंसिर २७ गते झापा पुगेका ज्ञानेन्द्र ...